Torohevitra momba ny fomba fanoratana lohateny sy lohateny lehibe mampino
Lohateny, lohateny, lohateny, lohateny… izay tianao hiantsoana azy ireo, izy ireo no zava-dehibe indrindra amin'ny atiny rehetra atolotrao. Inona no zava-dehibe? Araka ity infografika Quicksprout ity, raha 80% ny olona mamaky lohateny iray ihany 20% amin'ny mpijery no tsindrio. Ny lohateny lohateny dia manakiana fikarohana Optimization ary ny lohateny dia ilaina amin'ny fahazoana ny atiny nozaraina tamin'ny media sosialy.
Fantatrao izao fa zava-dehibe ny lohateny, mety manontany tena ianao hoe inona no mahatonga ny iray ho tsara ary ahoana no hanoratany, sa tsy izany? Androany no mahafinaritra anao anio satria Quicksprout dia namorona infographic izay hampianatra anao izany fotsiny.
Fampiasana adjectives, negativa, statistika ary formule amin'ny ankapobeny Isa na Trigger Word + Adjectif + Keyword + Promise mitovy amin'ny lohateny tonga lafatra. Niresaka anaram-boninahitra fohy sy mamy i Neil satria mazàna ny scanner ny olona ankehitriny.
Na dia mankasitraka lohateny fohifohy foana aza aho dia nahita tranonkala marobe nahazo taham-pahombiazana tsy hay tohaina miaraka amin'ny lohateny lava sy verosa izay mifandray amin'ny mpamaky. Tsy hatahotra ny hizaha toetra ny fohy sy ny lava aho. Azonao atao ny manitsy ny lohateny lohateny amin'ireo lohateny ireo mba tsy hanapahan'ny motera fikarohana ny lohateny niasanao mafy hivoarana.
Diniho tsara ny toro-hevitra farany… matetika tsy mahomby ny lohateny satria tsy mifanaraka amin'ny lahatsoratra voasoratra izy ireo, tsy voafaritra tsara izy ireo, ary manjavozavo ny lohateny. Mila fanampiana fanampiny ary te hiala voly? Aza adino ny Content Idea Generator avy any Portent izay manome soso-kevitra sasany amin'ny lohateninao, ao anatin'izany ny lohateny izay misarika ny saina amin'ny alàlan'ny paikady toy ny ego, fanafihana, loharano, vaovao, mifanohitra amin'izany, sy vazivazy.
Tags: fanafihanaBaker Marketingmpamorona hevitra atinyContentlymifanohitracopybloggerEchoMpandraharaha-dalanafastcompanylohatenin-gazetyny fomba fanoratana lohatenyny fomba fanoratana lohatenyhatsikanamampitombo ny tahan'ny click-throughhampitombo ny SERP CTRkissmetricsMarketingLandMozneil patelVaovaolohateny tonga lafatrafambaraAra-dalànaquicksproutloharanoStartupmoontoro-hevitra ho an'ny lohatenytoro-hevitra ho an'ny lohatenyanaram-boninahitra
Kroger Chefbot: Tranga fampiasa lehibe amin'ny fanomezana lanja amin'ny media sosialy miaraka amin'ny Teknolojia Bot
Aug 25, 2014 amin'ny 10: 07 AM
Brilliant! Mila listicles mitondra lohateny mahaliana kokoa amin'ny Internet izahay.